China oo ku guulaystay tijaabada diyaaradii u horeeysay ee rakaab ah ee uu sameeyay - Horn Future
China oo ku guulaystay tijaabada diyaaradii u horeeysay ee rakaab ah ee uu sameeyay
Beijing –Waxa maanta oo Jimca ah markii ugu horeeysay ka duushay diyaarad nuuca dhexdhexaadka ah oo loogu magac daray”C-919″ oo uu soo saaray China,tallaabo ka turjumaya hore-umarka farsamo iyo hamiga Beijing ee ah sidii ay ula tartami lahayd labada shirkadood ee dunida ugu weyn ee reer Yurub ee(Airbus) iyo Maraykanka ee( Boeing).
Diyaaradan oo ay sameeysay shirkadda dawladdu ay leedahay ee (Comac) oo loo soo gaabiyay (Commercial Aircraft Corporation of China),ayaa waxa ay ka duushay gegeda diyaaradaha ee (Shanghai International)kaas oo ahaa duulimaad diyaaradeed oo tijaabo ah.
Waxa diyaaradan ay ku soo laabatay isla gegedan diyaaradaha ee ay ka duushay kadib muddo saacad iyo labaatan daqiiqo ah,xilli kumanaan dad ah ay isku gu soo urureen goob u dhow hilinka diyaaradu ay ka duusho oo ay bilaabeen inay sacab tumaan farxad daraadeed.
Televishanka China ayaa sheegay in diyaaradan oo ay saarnaayeen howlwadeeno ka kooban 5 ay ku duuleeysay dherer joog ah oo ahaa ku dhawaad 3000 kun oo mitir iyada oo dhakhsaha ay ku duulaysay uu ahaa 300 oo kilomitir saacaddii,halkaas oo duuliyayaash loogu soo dhaweeyay sida geesiyaal oo kale markay kasoo degayeen sallaanka diyaarada oo la goglay dushiisa maro cas.
Taliska shuuciga ah ayaa waxa uu ka dhigay diyaaraddan oo uu daaha ka fayday nuuceega markii ugu horeysay bishii November 2015 su’aal ku xidhan kaalinta China ay ku jirto,isaga oo galiyay maal aad u tiro badan soo saarkeega.
Dhinac kale madaxweynaha China Xi Jinping ayaa sheegay sanadkii 2014 maqnaanshaha diyaarad China ay sameeyso in macnaheedu yahay inay ku hoos jirto ” naxariista kuwa kale “.
Halkan ka daawo muuqaal kooban oo ku saabsan diyaaradan….
« Golaha wakiilada Mareykanka oo laalay habkii daryeelka caafimaadka ee (Obamacare)	» Daraasad: Caanaha gadhoodhka/ciirta( yogurt) waxay la dagaalamaan murugada